ISIMISO - Shenzhen Soro Electronics Co., Ltd.
Inverter yeHybird Solar
Valiwe i-Gird Solar Inverter
Imvamisa ephezulu eku-inthanethi
Imvamisa ephansi eku-inthanethi
Izixazululo zamandla weTelecom
48VDC Solar Telecom amandla uhlelo
Amanethiwekhi endawo yaseSoro Impendulo yekhasimende i-soro revo inverter le inverter inemisebenzi eminingi eyingqayizivele. Isebenzisa amandla elanga amaningi kune-inverter yendabuko, futhi ngasikhathi sinye, ingakwenza ube nokuncintisana kakhudlwana emakethe futhi ikulethele inzuzo ethe xaxa.
Izinzuzo zechungechunge lweRevo zingokulandelayo:
1. Uchungechunge lweRevo lunemodi yokusebenza emine. Ikakhulukazi kwimodi yokusebenza ye- "Solar + AC", ama-solar nama-AC mains angashaja ibhethri futhi anike amandla imithwalo eyengeziwe. Ukusetshenziswa kwamandla amakhulu welanga Ukusetshenziswa kwamandla elanga kungaphezu kwe-15% kunamanye ama-inverter elanga.
2. IRevo series iyona kuphela enesikrini sokuthinta eMakethe. Kungasiza abasebenzisi ukuthi basebenze kalula. Inerekhodi elenziwe ngeMandla, irekhodi lokulayisha, umlando we-infotmation nerekhodi lamaphutha esikrinini.
3. Uchungechunge lweRevo lungaqala futhi lusebenze ngaphandle kwebhethri, futhi futhi lungasebenza nebhethri le-lithium.
4. Yonke le modeli ingafana nama-9pcs. Amandla we-maxium angu-49.5KW.
5. Ububanzi bokufaka obubanzi be-PV 120-450vdc.
Isakhiwo B22, Tantou West Industrial Park, Songgang Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, 518105 PRChina